Javier Mariscal, ray mpamorona an'i Cobi, ilay mascot an'ny Lalao Olaimpika | Famoronana an-tserasera
Javier Mariscal, ray mpamorona an'i Cobi, mascot an'ny Lalao Olaimpika ny toetra malaza an'ny Lalao Olaimpika Barcelona 1992. Misongadina amin'izany izy fomba quirky aiza ny sary maro loko an'ny tapaka lalan-dra haingana mahazo tanjaka miaraka amin'ny fomba fahita tena hafahafa an'izao tontolo izao izy ireo.
Fomba iray tsy manam-paharoa hamoronana no nahatratrarany ny asany rehetra fomban'ny marika mariscal aiza ny sary an-tsaina sy loko tototry izy ireo no tena manintona azy. Mariscal dia tsy isalasalana fa boky famoronana na ho an'ny mpanao sary na ho an'ny endrika na ho an'ny artista isan-karazany.
Resadresaka nifanaovana tamin'i Javier Mariscal, rain'ny mpamorona an'i Cobi
Amin'ity horonantsary kely ity dia afaka mahita vaovao vitsivitsy momba ny ampahany manokana amin'ity mpanakanto sary ityTsy misy isalasalana, izy dia toetra manaitra tokoa amin'ny sehatra manokana sy matihanina.
Tadidintsika rehetra Cobi ilay mascot mahafinaritra an'ny lalao Olaimpika Barcelona 1992, tsara ity alika namboarina Nahasarika antsika hatramin'ny fotoana voalohany izy noho ny fomba nanehoany an'izao tontolo izao tamin'ny fihetsiny mahatsikaiky.
Namorona karazana tetikasa sary: dokam-barotra, sary, tantara an-tsary, fiaraha-miasa amin'ny sarimihetsika, famolavolana vokatra ary tetikasa tsy tambo isaina amin'ny karazany rehetra, nahatonga azy ho mpamorona multidisiplinia afaka manao izay rehetra apetraka eo alohany.
Un tetikasa dokambarotra tena mahaliana no ataoko ho an'ny Orinasa H&M. Amin'ity tetik'asa ity dia hitantsika eo alohany ny fombany mba hanehoana an'izay mampiavaka azy amin'ny tsipika tsotra mahay manatsotra ny endriny amin'ny fomba somary misintona fa misy fikitika azo antoka.
Hita eo amin'ny efijery lehibe ny fombany Mandray anjara amin'ny maha-mpanao sary an-tsary ilay horonantsary aho Chico sy Rita. Tsy misy isalasalana, ny fombany tsara dia nitondra ambaratonga betsaka tamin'ity famolavolana sarimihetsika ity.
Afaka mahita kely ny nitaona mifandraika amin'ity sarimihetsika ity amin'ity horonan-tsary kely izay niresahan'ilay mpanakanto ny momba io tetikasa io. Ity mpamorona valenciana ity dia tsy miavaka fotsiny amin'ireo tetik'asa sary fa ho an'ny famolavolana fanaka izay ahafahany mampiditra ny fombany amin'ny zavatra isan'andro toy ny seza tsotra.
Miaraka amin'ny Seza duplex Nahavita nitondra ilay zavatra mankaleo i Mariscal tamin'ny fanovana azy ho zavatra velona, ​​velona ary feno angovo.
Ny famolavolana fanaka hafa tena mahaliana dia ny an'ny seza zaza miendrika alika noforonin'i Mariscal.
«Ny toerana malaza an'i Mariscal nitondra sary tamin'ny refy telo dia namela ilay alika Julián, iray amin'ireo mpandray anjara tao Los Garriris, ho tonga sombin-javatra avy amin'ny fanangonana ankizy koa Menataon'i Magis. Fitaovana multifunctional ity, vita amin'ny plastika miaraka amin'ny teknika famolavolana fihodinana, amin'ny loko fototra (fotsy, mena, maitso na mavo) ary mahatohitra ny ankizy sy ny olon-dehibe, mety ho seza izy io, nefa mety ho fiaran-dalamby, sambo, fiara na tendrombohitra koa mihanika, satria ny zaza manana saina dia afaka manao azy rehetra. Na seza ahazoana aina izay mahita ny toerany ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. » Web Javier Mariscal
Tsy misy fisalasalana Javier Mariscal dia nivadika ho referansa amin'ny sehatra famoronana misaotra ny toerana lehibe hamoronana famolavolana sary an-tsaina miaraka amin'ny iray rivotra zaza feno sary an-tsaina sy hanim-py. Raha mpanao sary ianao, Mariscal mpanakanto na mpamorona dia tokony ho ao amin'ny portfolio-nao referansa famoronana.
Azonao jerena ny pejiny manokana:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Javier Mariscal, ray mpamorona an'i Cobi, mascot an'ny Lalao Olaimpika